Mpanamboatra sy mpamatsy mitrandraka zavamaniry - Orinasa mitrandraka zavamaniry ao Shina
vovoka azo avy amin'ny fahasalamana vehivavy
vovoka hanina fahasalamana lahy
100% nalaina avy amin'ny zavamaniry Siberia Ginseng nalaina ...
Maca Root hanesorana 10: 1 5: 1
Pueraria lobata mitrandraka rano malaky savony 10%
Emodin Polygonum cuspidatum dia manala Emodin 90%
voaloboka voa fitrandrahana OPC95%
vovony lappaconitine 98%
Fitsaboana avo lenta (DIM) Diindolylmethane I ...
Agaricus Blazei holatra nalaina
luteolin dia mety levona kely amin'ny rano, asidra malemy, mety levona amin'ny vahaolana alkaly, miorina amin'ny toe-javatra mahazatra.
Fenitra kalitao: fenitra nasionaly
Apigenin dia manana diuretic, tosidrà mifehy, anti-bakteria, anti-inflammatoire ary ny asany hafa
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana ny Cytisine Extract natoraly izahay. Mba hananana vokatra, dia mitazona toe-tsaina tsara indrindra isika.
gentiopicroside dia karazana vovoka kristaly fotsy, izay mora levona amin'ny methanol ary saika tsy vonoina amin'ny ether.
Ity vokatra ity dia singa iray mahomby amin'ny fanoherana ny leukemia, izay mitoka-monina amin'ireo ravina maina ao amin'ny Isatis indigotica Fort, zavamaniry misy hazofijaliana Izy io dia mpivady fanafody anti-fivontosana indole.
fananana simika an'ny Rhizoma Drynaria fortunei (Kunze) j.sm. Ny akora mavitrika lehibe dia ny naringin, Ho fanampin'izany, dia misy akora simika isan-karazany, toy ny methyl eugenol, asidan'ny protokolechuic, glucoside beimeishengcao vaovao, glucoside osteoclast dihydroflavonoid, acetate cycloxylosterol,
manampy amin'ny fanamafisana sy fanamafisana ny capillaries amin'ny hoditra, ary toy izany dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fihenan'ny taolana. Izy io koa dia mampiseho toetra manohitra ny oxydant. misy vokany fanoherana ny inflammatoire izany, afaka mitazona ny fanoherana ny lalan-dra, mampihena ny fanjana azy, mampihena ny brittlement, manala lipida avy amin'ny fa
Ny salicin dia singa mavitrika voajanahary voajanahary nalaina avy amin'ny sampana na hodi-kazo an'i Salix babylonica L. tamin'ny alàlan'ny dingan'ny fitrandrahana maoderina.
Senna Lea Extract
Senna dia ahitra voajanahary izay ny raviny dia avy amin'ny zavamaniry Cassia senna. Ny ravina senna dia amidy matetika ao anatin'ny diteho detox satria misy effets laxative mahery ary afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fitohanana, izay misy fiatraikany amin'ny 16 ka hatramin'ny 33 isan-jaton'ny olon-dehibe. Na dia nanaiky senna aza ny FDA ho fotoana fohy ......
Sophora japonica dia mangidy amin'ny tsiro ary mangatsiaka amin'ny natiora. Miverina amin'ny aty sy ny tsinaibe. Izy io dia manana ny famafana ny hafanana, ny fanadiovana ny afo, ny ra mangatsiaka ary ny hemostasis. Izy io dia ampiasaina amin'ny hafanana tsinay, ra ao anaty seza, hemôrôida, mandeha rà, hafanan'ny aty, aretin'andoha ary fanina. Sophoricoside ...
mangatsiaka, maina, maizina ary avo ny mari-pana toy ny sakafo manampy amin'ny zava-pisotro, ampiasaina amin'ny zava-pisotro, fanafody sy fanafody ara-pahasalamana, fofona isan-karazany, zava-mamy sarotra, pickles ary preservatives hafa, fanalefahana sigara, paty nify tsy simba, tarehy fanosotra, divay sy fanahy, sns.